कस्तो अचम्मको संस्कार, जहाँ अर्काकी श्रीमती चोरेर दोस्रो बिहे गर्नु पाइन्छ ! पुरा समुदायले नै मनाउछन खुशीयाली….. – SUDUR MEDIA
जानकारी रोचक समाज
June 26, 2021 AdminLeaveaComment on कस्तो अचम्मको संस्कार, जहाँ अर्काकी श्रीमती चोरेर दोस्रो बिहे गर्नु पाइन्छ ! पुरा समुदायले नै मनाउछन खुशीयाली…..
एजेन्सी । पश्चिमी अफ्रिकाको एक आदिवासी समुदायकामा एउटा अनौठो संस्कार रहेको छ । बोदाब्बे नामक आदिवासी समुदायमा प्रचलित उक्त संस्कारअनुसार पुरुषहरु एक अर्काका श्रीमतीहरुलाई चोरेर बिहे गर्दछन् । यसरी अर्काकी श्रीमती चोरेर बिहे गर्नु त्यो आदिवासी समुदायको पहिचान नै हो ।संस्कार अनुसार, त्यो समुदायमा पुरुषहरुको पहिलो विवाह भने घरपरिवार सँगको राजीखुसी मै हुने गर्छ ।
त्यहाँ दोस्रो विहे गर्न पनि पाइन्छ तर त्यसका लागि पुरुषहरुले कुनै अरु पुरुषकी श्रीमतीलाई भगाउनु पर्छ । यसरी अर्काकी श्रीमती चोर्नका लागि हरेक वर्ष त्यहाँ एउटा मेला नै लाग्छ । जसलाई गेरेबोल महोत्सव भनिन्छ । त्यो महोत्सवका समयमा पुरुषहरु अनुहारमा रंग दलेर पुग्छन् र विवाहित महिलाहरुलाई अनेक प्रयत्न गरेर फकाउने कोसिस गर्दछन् ।
यसो गरिरहेको समयमा पुरुषहरु यो कुरा पक्का गर्न चाहन्छन् की अर्काकी श्रीमतीलाई फकाइरहेको बेलामा ती महिलाको लोग्नेले देख्न नपाओस् । अझ त्यसको सुइँको समेत नपाओस् । जब विवाहित महिला फकाउने पुरुषसँग बिहे गर्न राजी हुन्छिन् तब पुरुष ती महिलालाई लिएर फरार हुन्छन् । अनि उनीहरु भागिसकेपछि समुदायले नै खुसीयालीसाथ ती दुई जनाको बिहे गराइदिन्छ ।
कसैको मृ’त्युको खबर पाउनसाथ तपाई हामीले लेख्ने गरेको ‘RIP’ को खास अर्थ के हो ? १८ औ शताब्दीबाट सुरु भएको शब्दको खास अर्थ जान्नुहोस्
आज घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…..